Yakadhindwa PET Mukombe Vagadziri - China Yakadhindwa PET Mukombe Fekitori & Vatengesi
16 oz Yakadhindwa PET epurasitiki Makapu 92mm vane chinzvimbo che 375ml. Izvo zvinhu, Polyethylene Terephthalate (PET), inoyevedza, yakajeka sekara muvara rekusimudzira kuoneka uye inogona kupa yakasimba mukurumari.Yedu 12 oz tsika yakadhindwa PET yakajeka makapu epurasitiki anodhindwa neakachengeteka chikafu inks kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvakakodzera kune vese vatengi vechikafu. 12 oz Akadhindwa PET epurasitiki Makapu akakodzera kunhandare dzenhabvu, konzati, mabhawa, maresitorendi, zviitiko nezvimwe. Nemashandisirwo akawandisa, iwo anopa mukana unoshamisa wekutora yako brand, logo kana dhizaini mumaoko evatengi vako
Tsika yakadhindwa PET mukombe
- Kusvikira 6 mavara ekudhinda
- Lead Nguva 2-6 mavhiki
- Inowanikwa Saizi: 2oz, 4oz, 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 20oz, 24oz, 32oz
Ingotitumira rako rakagadzirirwa faira kana isu tinogona zvakare kugadzira dhizaini dhizaini yako.
Yedu yekristaro yakajeka PET (polyethylene terephthalate) epurasitiki makapu anogamuchira kwazvo kudhinda, zvichireva kuti tinogona kuwana yakasarudzika mhando kupedzisa Inogona kudhindwa mu1 kana 2 nzvimbo yePantone mavara uye inogona kupihwa neinosarudzika domed kana yakati sandara mashanga akatsemurwa zvivharo.
Muzuva rino nenguva, chivakwa chechiratidzo chakakosha kwazvo. tsika yakadhindwa epurasitiki makapu nekambani yekambani yako kana sirogani inowedzera yako yakasarudzika chiziviso kune vatengi vako, ichiumba chikamu chemushambadziro wako wekumaka.
tsika yakadhindwa epurasitiki makapu iri kukosha-wedzera sevhisi kune vatengi vedu. isu tinopa yekumaka uye yakasarudzika yekudhinda masevhisi pane edu akasiyana eanoraswa chikafu kurongedza zvakare - zvakagadziriswa kudhinda pamapurasitiki makapu, kofi makapu, biodegradable makapu uye nezvimwe!
Yakadhindwa PET Plastic Makapu muChina
Isu tiri nyanzvi yekugadzira ye Yakadhindwa PET Plastic Makapu mukati china Izvo zvinhu, Polyethylene Terephthalate (PET), ine hushamwari, yakajeka kristaro muvara rekusimudzira kuoneka uye inogona kupa yakasimba mukurumari. Zvese zveduBvisa PET epurasitiki Makapu inogona kuve yakarongedzwa uye yakadhindwa nechero zvaunofungidzira zvaunogona kupa uye yedu-imba dhizaini iri padanho nhanho dzese dzenzira, kubatsira kuunza mazano ako kuhupenyu!